कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालू आव २०७५/७६ को पहिलो त्रैमासको एनएफआरएस वित्तीय विवरणअनुसार वितरणयोग्य नाफा रू. ५८ करोड २२ लाख रहेको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १ सय ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले रू. २७ करोड ८६ लाख नाफा कमाएको थियो ।
पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी २ सय १२ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा १ सय ८० प्रतिशतले वृद्धि भएकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ३ करोड पुर्‍याएको कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. ५ अर्ब ९ करोड छुट्याएको छ । कम्पनीले जगेडा कोषको रकम गत आवको पहिलो त्रैमासको भन्दा १ सय १५ प्रतिशत बढी छुट्याएको छ । साथै, कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश प्रस्तावका लागि कम्पनीले पुस ४ गते साधारणसभा गर्दै छ । कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ३२ नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल कम्पनीका कुल शाखा सङ्ख्या २ सय ५० रहेका छन् । कम्पनीले निक्षेपकर्तालाई थप सेवा विस्तारका लागि यस वर्षभित्रै थप ५० ओटा एटीएम सञ्चालनमा ल्याउने सम्भाव्यता अध्ययन गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
2018-11-29 - 199 view(s) - abhiyan